PAUK January 21, 2010 at 11:44 PM
နေထွက်ခါစ ပုံကို ပိုကြိုက်တယ်..။။
မသက်ဝေနဲ့ တွေ့ကြရင်တော့ တိမ်တောက်ချိန်ကိုရွေးမှ ဖြစ်မယ်။။
သီဟသစ် January 22, 2010 at 12:27 AM
တိမ်တောက်ချိန်က ပုံလေးကို ပိုကြိုက်တယ်။ :)
နေညိုချိန် တိမ်တောက်တဲ့ အခါ သီချင်း ဆိုသွားသည်..
Hmoo January 22, 2010 at 1:57 AM
[Blind shot ] :)
မီယာ January 22, 2010 at 5:22 AM
အားပေးတယ် အမရေ... ၂ပုံလုံး တမျိုးစီ ကြိုက်တယ်...
ရွှေရတုမှတ်တမ်း January 22, 2010 at 5:35 AM
ဒီတခါ နှစ်ကျပ်ခွဲနဲံ့ လကွယ်ညသန်းခေါင်မှာ ကပ္ပလီမလေးအပြုံးကိုရိုက်ပြပါဦး
T T Sweet January 22, 2010 at 7:32 AM
၂ကျပ်ခွဲတန်ကြီးက ခုတော့ တော်တော်အသုံးတည့်နေပြီပေါ့ ...နော။ ကိုယ့်လက်ရာဆိုတော့ စားရတော့ မယ် မှတ်ထှာ ...း) တိမ်တောက်တဲ့ပုံလေးကို ပိုကြိုက်တယ် ...
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ January 22, 2010 at 8:57 AM
ကင်မရာရှေ့ ထွက် မတ်တပ်ရပ်ပြပါဗျို့...:P
P.Ti January 22, 2010 at 10:01 AM
နှစ်ကျပ်ခွဲကောင်းတာထက် အမကိုက တော်နေတာ... အနုပညာမျက်စိရှိပါတယ်ဆို... ဘယ်သူလဲကွ ငါ့အမကို မနက်စောစော မထနိုင်ဘူးထင်တာ.. :D
momiji January 22, 2010 at 10:29 AM
I like the first one. it looks like picture.
great one. now,I am also thinking to buy.:P
but it is not easy to bring.
စုချစ် January 22, 2010 at 1:37 PM
အစ်မ... မိုက်တယ်... ပုံလေးတွေက...
ပုံကောင်းကောင်းတွေ နောက်မှ လာတောင်းရမယ်..
အိမ်က အစ်မသူငယ်ချင်းတော့ ပြောမရဆိုမရ... ကင်မရာပစ်စည်းတွေ အများကြီးထပ်ဝယ်နေပြန်ပြီ....သိလား
သက်ဝေ January 22, 2010 at 5:02 PM
ပေါက်... ဟုတ်တယ် တိမ်တောက်ချိန်မှ ဖြစ်မယ်... မဟုတ်ရင် ပေါက် ည ည အိမ်မက်ဆိုးမက်ပြီး အိပ်မပျော်ပဲ နေလိမ့်မယ်...။`
သဟသ... အချင်းချင်းတွေ... ဟဲဟဲ..း))
နေညိုချိန် တိမ်တောက်တဲ့အခါ... သီချင်း အစ အဆုံး ရသလား...
ရရင် ဆိုပြပါ။ ကိုယ်ကတော့ အဲဒီတကြောင်းပဲရတယ်။
Hmoo... မနောက်ပါနဲ့..း))
သူများတွေကြားရင် အဟုတ်မှတ်နေလိမ့်မယ်...း(
မီယာ.. တီတီဆွိ... ကျေးဇူး..း))
ကိုကြီးကျောက်... စိတ်ချ... လကွယ်ညသန်းခေါင်မှာ မီးသွေးပုံထဲက မဟူရာရောင် အင်္ကျီဝတ်ထားတဲ့ ကပ္ပလီမလေး အပြုံးကို ရိုက်ပြပါ့မယ်...
ကိုရွာသား... ဒီလို မနောက်ရဘူးလေ... ကိုယ့်ဓါတ်ပုံတင်လိုက်ရင် ဘလော့ဂ်ကို ဘယ်သူမှ လာမှာမဟုတ်တော့ဘူး...း(
ကိုပီတိ... ကျီးနဲ့ ဘုတ်... ဘုတ်နဲ့ ကျီး..း))
ဒီမှာတင် အားမရလို့ Flickr အထိရောက်...
ညီမလေး မိုမိဂျိ... ဝယ်သာဝယ်... သယ်ရတာ လွယ်ပါတယ် သယ်ပေးမယ့်သူပါ တခါတည်းခေါ်သွား...
စုချစ်... လိုရင် အကုန်လုံး ယူ...း))
အမလဲ ထပ်ဝယ်ချင်တာတွေ ရှိနေပြီ... သူ့ဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး မေးအုန်းမှ... ပြောမရ ဆိုမရ ရဲ့ သူငယ်ချင်း တားမရ ဆီးမရ လေ...
မှတ်ချက်များ အားလုံး အတွက် ကျေးဇူးပါ...
ချစ်ကြည်အေး January 22, 2010 at 7:47 PM
ကျွတ်......သက်ဝေ နဲ့ အိမ်ချင်းမနီးတာ နာသကွာ...နိူ့မှုတ်ဆို မော်ဒယ် ဝတုတ်ပုံတွေ ချစ်ကြည်အေး ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ပိတ်သတ်ကြီးတွေ မြင်နေရ လှပြီ...ခွိခွိ....
ပုံ / အရိုက်ခံချင်သူ မော်ဒယ် ဝတုတ်
သင်းနွယ်ဇင် January 22, 2010 at 9:22 PM
ဓါတ်ပုံလေးတွေ လာငေးသွားပါတယ်။ တကယ်လှတယ်။
Moe Cho Thinn January 23, 2010 at 9:24 AM
တိမ်တောက်ချိန်ကိုသာ ကြိုက်မိတဲ့ အကျည်းတန် ချစ်သူရယ်ပါ.. :))
khet myint myint January 23, 2010 at 1:56 PM
သက်ဝေ January 23, 2010 at 3:56 PM
မယ်ချစ်... အရိုက်ခံချင်တယ်ပေါ့.. ဟုတ်စ...
စိတ်ချ.. သူငယ်ချင်းဆန္ဒ ပြည့်ဝစေရမယ်...
သင်းနွယ်ဇင်... အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ချိုသင်း... မင်းဘဝနဲ့ ကိုယ့်ဘဝ အတူတူပါပဲကွယ်...
ခမမ... နှစ်ကျပ်ခွဲက နီကွန်ပါ...
နောက်မှ ဓါတ်ပုံတွေ တင်လွန်းလို့ မျက်စေ့နောက်တယ် မပြောနဲ့..း))
ကလူသစ် January 23, 2010 at 6:06 PM
၂ကျပ်ခွဲတွေ အုန်းသီးတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်တဲ့သူတွေ တော်တော်များနေပါကဗျား။ အပြင်ထွက်လို့ကြည့်လိုက်ရင်လဲ လူတော်တော်များများမှာ အုန်းသီးကြီးဆွဲလို့ ။ ဟုတ်နေကြတာပဲ။ အနေအထိုင်တောင် တော်တော်ဆင်ခြင်နေရတယ်။ တော်ကြာ မဟုတ်က ဟုတ်ကပုံတွေ ပါသွားမှာစိုးလို့ :)
mae January 25, 2010 at 10:01 PM
ပေါက်နဲ့ ဆန့်ကျင်စွာ အောက်က ပုံကို ပိုကြိုက်တယ် မမသက်ဝေ၊
Phyo Maw January 30, 2010 at 11:53 PM
=D အုန်းသီး အစွမ်း။